नेपाल आज | रेस्लर नातिनीको ‘सेक्सी चिया’
रेस्लर नातिनीको ‘सेक्सी चिया’
तस्वीर : चन्द्र राई
नेपालकै पहिलो महिला रेस्लर भगवती खड्का र रेस्लिङ खेलाडी सिर्जना कोजु । रिङ्मा कुस्ती लडिरहेका थिए । प्रशिक्षक खड्काले ती महिलालाई सधैंझैं विहान तालिम दिइरहेकी थिइन् । एकले अर्कालाई हराउने दौडमा लागेका उनीहरूको गर्जन देखेर ८४ वर्षीया वृद्धा मुख छोपी छोपी हाँस्थिन् । लाग्थ्यो–चाउरिएको निधार र दाँत नभएका गिजाले अनेकन भाव पोखिरहेका थिए । अनुहारमा अलि अलि लाजको भाव प्रष्ट देखिन्थ्यो । प्रशिक्षण सकिएपछि प्रशिक्षक खडकाले हामीलाई चिया खुवाउने प्रस्ताव राखिन् ।
ढिलो भइसकेकोले हामीले आनाकानी गर्दै थियौं । उनले कर गरिन्, ‘त्यसो नभन्नुस् न । म कस्तो ‘सेक्सी’ चिया पकाउँछु । खाएरै जानुपर्छ ।’ लाग्यो मान्छे साह्रै मिजासिली । रमाइलो र ख्याल ठट्टा गर्नमा कुनै कसर बाँकी राख्दिनन् । छेवैमा एकतमासले उनले कुस्ती लडेको हेरिरहेकी ती ८४ वर्षीया वृद्धालाई सोध्छिन्– ‘आमा भन्दिनु न, म कत्ति सेक्सी चिया पकाउँछु है ?’ वृद्धा लजाइन् ।
छैवैमा बसेका साथी सागर बुढाथोकीले झनै जिस्क्याए ती वृद्धालाई ‘कस्तो चिया रे आमा ?’वृद्धा झनै लजाइन् । सबैैले कर गरेपछि लजालु भावमा भनिन्, ‘सेक्सी’ । त्यो ‘सेक्सी’ चिया कस्तो हो खडकालाई नै थाहा होला । तर मेरो मनमा भने ती वृद्धाको जीवनकथा जान्ने उत्सुक्ता जाग्न थाल्यो । उनी थप लजाएको हेर्न आतुर साथी सागरले फेरि जिस्क्याए । ‘आमा आइ लभ यू’, उनी झनै लजाइन् । आइ लभ यू टू भन्न लगाएर त्यो क्षण आफ्नो मोबाइलको भिडियोमा पनि कैद गर्न भ्याए साथी सागरले ।
दुर्गामाया खड्का उमेरले ८४ पुगिन् । रामेछापकी स्थायी बासिन्दा उनको सधैंको समय त्यसरी नै बित्छ । नातिनी भगवती खड्काले कुस्ती सिकाएको हेरेर । सधैं हेरे पनि उनको प्रतिक्रिया ‘घरकी मुर्गा दाल बराबर’ जस्तो भने छैन । उनी सधैं भगवती गर्जिएको देखेर त्यसैगरी हाँस्छिन्, ‘मुख छोपेर’ । चाउरिएका गाला खुम्च्याउँदै उनी दंग परेको देख्दा भगवती पनि मख्ख पर्छिन् ।
त्यो दिन त्यसै गयो । दिउँसभरि एउटै कुराले मनमा डेरा जमाइरह्यो । नारी दिवस नजिकिदैं थियो । साँच्चै उनको बेलामा नारीको अवस्था कस्तो थियो होला ? सायद उनी पनि कलिलो उमेरमै विवाह गरेर आफ्नो घरजम गर्न थालेकी थिइन् होला । कुनै समय महिलाले पढ्दासम्म कूल रिसाउँछ भन्ने नेपाली समाजमा हुर्किएकी उनी अहिले महिलाले कुस्ती लडेको देख्दा कस्तो लाग्छ होला ? यस्तै कौतुहलताले निद्रा बिथोलियो । विहानै उनको अनुभव सुन्न पुगें भगवतीको निवासमा ।
अर्को दिन विहान जाँदा माहोल उस्तै थियो । भगवती अर्की खेलाडी आकृती पूनलाई तालिम दिँदै थिइन् । पारिलो घामको न्यानो स्पर्शमा वृद्धा कुस्ती हेर्दै थिइन्, ‘लाइभ’ । भगवती खड्का नेपालकै पहिलो महिला रेस्लर । उनमा सारा नेपालले गर्व गर्छन् । हजुरआमालाई भने नातिनीले कुस्ती खेल्नेबारे थाहा भएको मात्र एक महिना भएको रहेछ । नेपालकै पहिलो महिला रेस्लर भन्ने कुरा पनि उनले थाहा भएको धेरै समय भएको भएको छैन । नातिनीको प्रगति देख्दा विछट्टै खुसी छिन् उनी ।
रामेछापबाट नातिले महिना अघिमात्र त्यहाँ ल्याएका रहेछन् । काठमाडौं आएदेखि उनको दिनचर्या त्यही भएको छ । रिङको छेवैमा बसेर खेल हेर्ने । सुरु सुरुमा त उनलाई अचम्म लाग्थ्यो । के खेलेको होला यस्तो भनेर चकित हुन्थिन् । मारपिट गरेको देख्दा बेलाबेलामा तर्सिन्थिन् । पहिलो पटक त्यहाँ भएको रेस्लिङ् हेर्दा उनको अनुभव बेग्लै थियो । रिङमा भगवतीलाई उनकी अपोनेन्टले मज्जाले पिटिरहेकी थिइन् । नातिनीले खेलेको हेर्न बसेकी उनलाई भित्रैबाट डाहा छट्पटि भएछ । कुटाइ खाएको हेर्न नसकेपछि बसेको ठाउँबाट जुरुक्कै उठिन् उनी । कुस्ती खेलिरहका दुवैलाई छ्ट्याउन । भगवतीका दाजुले सम्झाएर राखेपछि बल्ल सम्हालिइन् ।
कहिलेकाहीं त मारपिट गरेको देख्दा रोइन् पनि उनी । किनभने भगवती उनकी एक्ली नातिनी हुन् । औधी माया लाग्ने नातिनीले कुटाइ खाएको हेर्न सक्ने क्षमता हजुरबुबा हजुरआमासँग हुँदैन । पानी सधैं तल तल बगेजस्तै माया पनि तलै बग्छ भन्ने विश्वास छ । दुर्गामायाको हकमा पनि त्यस्तै छ । छोराछोरी भन्दा पनि बढी माया उनलाई नातिनातिनाको लाग्ने बताइन् । अहिले त सधैं बसेर कुस्ती लडेको हेर्दा हेर्दै बानी लागिसक्यो उनलाई । अब त रिङमा पछारिँदा आउने आवाजले पनि झर्को लाग्न छोडिसक्यो ।
दुर्गामायाका श्रीमानले दोस्रो विश्वयुद्ध लडेका थिए । लडाकु श्रीमानकी नातिनी भगवती पनि ठ्याक्कै आफ्नो हजुरबुबा गोता गएको बताउँछिन् उनी । एक महिना अघि मात्र यहाँ आएकी दुर्गामायालाई काठमाडौं रमाइलो लागिरहेको छ । भगवती खड्काको हजुरआमा भन्नेवित्तिकै रेस्लिङ सिक्न आउनेहरू पनि झ्याम्मिन्छन् । गफ गर्ने मान्छेको कमी छैन उनलाई । बेलाबेलामा पत्रकार तथा युटुबरहरू आउँछन् । उनको फोटो भिडियो खिच्छन् । उनी अचम्म मान्छिन् । त्यसमै रमाउँछिन् ।
बाँचुञ्जेल अब काठमाडौं पनि बस्ने, उता गाउँ पनि जाने तय गरिसकेकी छिन् उनले । दुवै नाती र नातिनीको विवाह भएको छैन । दुर्गामायाको एउटै इच्छा छ, दुवैको विवाह खान पाउने । उमेरले डाँडा काट्नै लागेको कारण पनि उनी अन्योलमा छिन्, नातिनातिनाको विवाह खान पाइने हो कि होइन भन्नेबारे ।
आज विश्वव्यापी नारी दिवस मनाइँदै छ । नारीका संघर्षका दिनका प्रतिनिधि पात्र हुन् दुर्गामाया । उनका चाउरिएका निधारका प्रत्येक धर्र्साले नारी हुनुको संघर्षको कथा बोल्छ । हिजोका तिनै संघर्षले आजका नारी केही फरक छन् । ‘आमा आज नारी दिवस हो नि’, भनेर भन्दै गर्दा हठात् उनले आफ्नो हातको नाडी देखाउँदै भनिन्, ‘के भयो बा मेरो नाडी’ । नारी दिवसबारे थाहा छैन तर नातिनीले गरेको काम र रेस्लिङप्रतिको मोहलाई उनले छाती खोलेर सम्मान गरेकी छिन् ।
पहिलाको महिलाजस्तै घर भान्सामा बस्नुुपर्र्छ की भगवती खड्का जसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रश्न गर्दा उनले घरमामात्रै सिमित हुनुमा असहमति जनाइन् । छोरीचेलीले काँचुली फेरेको देख्दा उनी दंग छिन् अहिले । अहिलेका पुस्तालाई हेरेर आफ्ना पालाका कुरा सम्झिदा चकित हुन्छिन् ।
छोरीलाई पढाउन हुँदैन भन्ने नेपाली समाजमा हुर्किएकी उनले क ख रा सिक्नै पाइनन् । सन्तान जन्मिएपछि छोराले क ख रा चिनाएका थिए । अन्तिममा ख्याल ठट्टाकोभावमा हजुरआमालाई फोरि सोधियो, ‘आमा, सेक्सी भनेको हे होला भन्नु त ? उनको उत्तर, ‘क ख रा सिक्नै पाइन बा मैले । के थाहा कुन्नि सेक्सी भनेको के ? त्यसैले(भगवती) जानोस् ।’
महिला रेस्लर भगवती खड्का